In ka badan 500 oo meydad ah oo mamulka gobolka Banaadir uu diiwaan-geliyey - Awdinle Online
In ka badan 500 oo meydad ah oo mamulka gobolka Banaadir uu diiwaan-geliyey
Guddoomiyaha gobolka Banaadir, Cumar Maxamuud Maxamed (Filish) oo xalay khudbad ka jeedinayey kulan ka dhacay Muqdisho ayaa ka hadlay saameynta ka dhalatay cudurka Coronavirus ee ka dilaacay Soomaaliya.
Cumar Filish ayaa sheegay in tan 19-kii bishii la soo dhaafay ee March ay baaritaano ku sameynayeen dadka dhinta ee la geeyo Qabuuraha ku yaalla caasimada.
Duqa Muqdisho ayaa shaaciyey in illaa iyo hadda ay diiwaan-geliyeen meydadka ku dhowaad 500 oo qof, kuwaas oo ku geeriyooday gobolkaan Banaadir.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay aamin-san yihiin inay dadkaasi badi u dhinteen cudurka halista badan ee Coronavirus oo haatan fara ba’an ku haya Soomaaliya.
Tiraddii ugu badneyd ee ay diwaan-geliyaan hal maalin ayuu ku sheegay 43 ruux , halka tiradii ugu yareydna uu ku sheegay guddoomiyuhu 22 qof.
Guddoomiye Filish ayaa ugu dambeyn ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay qaataan talooyina caafimaadka, si loo xakameeyo fidista Covid-19.
Hadalkaan ayaa ku soo aadaya, iyadoo dhowaan wasiirka warfaafinta Soomaaliya uu shaaciyey in qof kasta xililigan dhinta ay dowladda federaalka u aqoonsan tahay inuu dilay cudurka Coronavirus, kaas weli ku sii fidiya wadam badan oo ku yaalla caalamka.
Previous articleGuddoomiyeyaashii degmooyinka Garbahaareey oo xilalka laga qaaday iyo Guddoomiyihii Garbahaareey oo ka soo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyey
Next articleMareykanka oo ugu dambeyn ku dhawaaqay daawadda ugu haboon ee loo isticmaalo Corona Virus